Madasha XQ oo xaqiijisay Wararkii KON maalmo kahor soo qortay | KEYDMEDIA ONLINE
Madasha XQ oo xaqiijisay Wararkii KON maalmo kahor soo qortay
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa war qoraal ah waxay ka soo saareen guddiyadii doorashooyinka iyo xallinta Khilaafaadka ee dhawaan ay magacawday xukuumadda uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madasha Xisbiyada Qaran ayaa qoraal ay soo saareen caawa waxay aad ugu cambaareeyeen hanaanka loo soo xulay guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer Federaalka.
Qoraalka Madasha ayaa lagu sheegay in guddiyada la soo magacaabay ay ku jiraan xubno ka tirsan hey’adda Nabad sugidda iyo sirdoonka Qaranka iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya sida ay horayba u daabacday KEYDMEDIA ONLINE waxayna madasha qoraalkeeda ku cadeysay in arrinkaasi uu hareer marsan shuruucda dalka iyo heshiisyadii horay loo galay.
Madashu waxay sheegtay in xukuumadda Federaalka aysan wax sharciyad ah u laheyn inay soo magacaawdo xubnaha gobollada Waqooyi ku metelaya guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka heer federaalka, waxayna Ra'iisulwasaaraha JFS Rooble ugu digeen cawaaqib xumida ka dhalan karta arrintaas.
Sidoo kale, madasha ayaa talo ahaan u soo jeedisay in hanaankii doorashadii 2016-kii loo maro soo doorashada kuraasta gobollada Waqooyi ee Somaliland, isla markaana howshaas loo madax-baneeyo guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi maadaama uu ka mid yahay hoggaanka ugu sareeya dalka, kana soo jeedo gobollada waqooyi ee Soomaaliland.
Keydmedia Online ayaa labadii todobaad ee lasoo dhaafay marar badan ka hadashay guddiyadda doorashooyinka iyo shaqsiyaadka la magacaabay oo laga soo dooray Villa Somalia iyo Xarunta Nabad Sugidda, waxeyna KON u dirtay warbixintaas dhamaan Xafiisyadda Dowladda Federaalka iyo Mucaaradka.
Xubnaha uu Ra'isul Wasaare Rooble magacaabey waxaa kamid ah gacan-yarihii Farmaajo, Cabdinuur Maxamed iyo xubno kaloo ka tirsan hay'adda Sirdoonka Soomaaliya ee NISA, oo taliyaheeda Fahad Yaasiin awood ku leh dowladda.
Sidoo kale, KON ayaa ayaa si gaar ah u heshay liiska magacayadda xubnaha Galmudug ku matelaya labada gudi doorasho, kuwaasoo go’aanka magacaabistooda uu leeyahay madaxa Nabad Sugida Soomaaliya, Afar kamid ah sideeda xubnood ee Galmudug waxey ka tirsanyihiin Nabad Sugidda Soomaaliya, halka labo kale ay la shaqeyaan Fahad Yaasin.
Warkan kasoo baxay xafiiska Madasha isagoo dhammeystiran halkan hoose ka akhriso: